အောင်မြင်ဖို့ . . . ရိုးသားရမယ် | Mizzima Myanmar News and Insight
အောင်မြင်ဖို့ . . . ရိုးသားရမယ်
Yope ပရိတ်သတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဒီတစ်ပတ် YopeRedchair မေးခွန်းတွေကိုဖြေပေးမယ့် သူကတော့ မော်ဒယ်လ် လုပ်ရင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင် လောကထဲကိုတဖြေးဖြေးနဲ့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ သူ၊ ပြီးတော့ အခုလက်ရှိမှာဇွတ်ကျားဆိုတဲ့ ဟာသရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ၊ မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် “ထူးအောင်”ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး- ကိုထူးအောင် မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ redchairအစီအစဉ်ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။ ပထမဆုံး ကျွန်တော် မေးချင်တာက ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ မော်ဒယ်လ် လောကမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့ အောင်မြင်မှု ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ဘယ်လို ပြုမှု နေထိုင်မလဲဆိုတာပါပဲ ။
ဖြေ -ဘယ်လိုပြုမှု နေထိုင်မလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်မှာအောင်မြင်တဲ့ သူတစ်ယောက် မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ပြုမှုနေထိုင်မလဲဆိုတော့ အကုန်လုံးတော့ ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ စိတ်ထားကောင်းဖို့ အဓိကပေါ့။ ရိုးသားရမယ်။ စိတ်ထားကောင်းရမယ်။ ပြီးလို့ ရှိရင် ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ရမယ်။ တိကျရမယ်။ အဲဒါဆိုရင် ရပြီ။
မေး - အချစ်ဆိုတာအောင်မြင်မှုကိုတက်လှမ်းတဲ့ နေရာမှာအနှောင့်ယှက်တစ်ခုလို့ ထူးအောင်အနေနဲ့ ယူဆပါသလား။
ဖြေ -ယူဆပါသလားဆိုတော့ အခြေနေက နှစ်ခုရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအခုရှိနေတာပေါ့နော်။ ပထမတစ်ခုကအချစ်ကိုအရမ်းအချိန်ပေးတဲ့အခါ ၊ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်မှာထိခိုက်တယ်။ နောက်ထပ် တစ်ခုကအချစ်ကြောင့်လည်းအလုပ်တွေ ပိုလုပ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေ ရှိလာတယ်ပေါ့။ အချစ်ကြောင့် ကိုယ်ကmotivationတွေ အများကြီး ဖြစ်ပြီးတော့ လုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေ အများကြီး ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီနှစ်ခုကဘယ်တစ်ခု ဖြစ်မလဲ ကျွန်တော် မသိသေးဘူးပေါ့။
မေး - ကိုယ့်ဘဝမှာစိတ်ကျေနပ်မှု အရှိဆုံးအခိုက်အတန့်လေးကိုပြောပြပါဆိုရင် ဘယ်ကာလ ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ -စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိတဲ့ အခိုက်အတန့်ဆိုရင် ကျွန်တော် ဆုရတဲ့ အခိုက်အတန့်တော့ သတိရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကပိန်တယ်။ အခုတော့ ခန္ဓာကိုယ် နည်းနည်း ကြီးလာတာပေါ့နော်။ အဲဒီကြီးလာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဆုရဘူးတယ်။ အဲဒီဆုရတုန်းက ကျွန်တော် အရမ်းကျေနပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီဆုရဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိတယ်။ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်းဖြစ်တဲ့ အခါမှာကိုယ်ကျေနပ်တယ်။
မေး - မြန်မာအမျိုးသားမော်ဒယ်လ် အများစုကိုယောက်ျားလေးတွေကဂေးလ် လို့ အများစုဝေဖန်ကြတယ်။ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါလဲ။
ဖြေ -ဘာကြောင့်လို့ ထင်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ် လုပ်တဲ့ အခါမှာတစ်ခါတလေကျရင် မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းရတယ်။ ဆံပင်ပုံစံမျိုးစုံလုပ်ရတယ်။ အဝတ်အစားမျိုးစုံဝတ်ရတယ်ပေါ့။ ဥပမာဒီဇိုင်နာပွဲတွေဆိုရင် တစ်ခါတလေကျ ယောက်ျားဆန်တာလဲပါမယ်။ မိန်းမဆန်တာလဲပါမယ်။ အဲဒီခါကျတော့ သူတို့တွေကပြောဆိုဆက်ဆံတာလဲရှိမှာပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကကြီးမှာအလုပ် အတူတူလုပ်နေရတာ။ ကျွန်တော်တို့ကမော်ဒယ်လ် လည်းအတူတူလုပ်ရမယ်။ မိတ်ကပ်ဆရာနဲ့လည်းအတူတူအလုပ် လုပ်ရမယ်။ ဓာတ်ပုံဆရာနဲ့ အတူတူအလုပ် လုပ်ရမယ်။ ပြီးရင် စတိုင်လ်လစ် တွေနဲ့လည်းအတူတူအလုပ် လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။ အကုန်လုံးအတူတူလုပ်တော့မှ ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်။ အဲဒီအခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပေါင်းစည်းနေရတာပေါ့နော်။ အဲဒီအခါကျတော့ သူများတွေကဘေးကလူတွေ မြင်တဲ့ အခါ သူတို့ကဘာတွေလဲ။ အဲဒီလိုမေးခွန်းတွေ ခဏခဏတက်လာတယ်ပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ကမဖြေရှင်းဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကအကောင်းမွန်ဆုံးပရိသတ်ကို ချပြဖို့အတွက် စည်းစည်းလုံးလုံးလုပ်နေတာပေါ့နော်။ အခြားဘာစိတ်မှ မပါဘူး။ အဲဒီတော့ သူများတွေ ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခါတလေဂေးလ် လို့ ၊ အဲဒီလိုဝေဖန်သုံးသပ်တာတွေ ရှိတာပေါ့နော်။
မေး - ဘဝမှာအသိဉာဏ်နှင့် ငွေကြေးဘယ်ဟာကပိုပြီးတော့ အရေးကြီးပါသလဲ။
ဖြေ- အသိဉာဏ်နှင့် ငွေကြေးဆိုရင် အသိဉာဏ်ကပိုပြီးအရေးကြီးမယ်လု့ိထင်တယ်။ ငွေကြေးပမာဏဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ၊ အဲဒီငွေကြေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် စဉ်းစားတတ်တဲ့ ဦးနှောက် မရှိဘူးဆိုရင်လည်းအလကားပဲလေ။ အဲဒီတော့ ဦးနှောက်ကအဓိကပဲလို့ ထင်တာပဲ။ ။